Muqdisho oo marti gelineysa shirka IGAD iyo ammaanka oo aad loo adkeeyay – Radio Muqdisho
Muqdisho oo marti gelineysa shirka IGAD iyo ammaanka oo aad loo adkeeyay
Ammaanka magaalada Muqdisho ayaa aad loo adkeeyay, iyadoo la xiray qeybo ka mid ah waddooyinka muhiimka ah.
Ciidamada ammaanka ayaa billaabay howlgallo dheeraad ah oo lagu adkeynayo ammaanka, waxaana gaadiidka laga joojiyay isticmaalka wadooyinka qaar.
Sidoo kale ciidamo farabadan ayaa lagu arkayaa wadooyinka magaalada, kuwaasoo uu ka muuqdo taxadar iyo feejignaan dheeraad ah, waxeyna meelaha qaar ku baarayaan gaadiidka.
Howlgalkan ayaa hordhac u ah qorshayaal lagu xoojinayo ammaanka Muqdisho, inta uu socdo shirka wasiirrada arrimaha dibadda ee wadamada IGAD oo la filayo in Muqdisho lagu qabto dhawaan.
Dowladda ayaa sidoo kale wadda qaban qaabo iyo diyaar garow ku aadan marti gelinta shirka wasiirrada arrimaha dibadda ee wadamada urur goboleedka IGAD.
Magaalada Muqdisho ayaa 24-sano kadib marti gelineysa shirka IGAD, taasinana waxey sare u qaadeysaa maqaamka dowladnimadeena, iyadoo tani ay marqaati cad u tahay in magaalada Muqdisho ay ka soo baxday muqdigii.
Muungaab oo ka qeybgalay munaasabad xalay lagu qabtay degmada Hodan
Aas’aaskii ururka iskaashatooyinka oo loo dabaal degay
Aas'aaskii ururka iskaashatooyinka oo loo dabaal degay